China X6 zenziwe purple kunye Factory | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
Umlinganiso ongadibaniyo nawo: Ukuphepha ukudibana ngqo nolusu kwenza ukuba inkqubo yokulinganisa ikhuseleke kwaye ibe sempilweni, kwaye umgama webanga le-5-8cm unokuthintela usulelo olunqamlezileyo, ibunzi le-thermometer engachukumisiyo yabantu abadala.
Fahrenheit Readings Available: Unokukhetha ukulinganisa usebenzisa iFahrenheit okanye iCelsius. Kananjalo unokusebenzisa le thermometer ukulinganisa ubushushu bomzimba womntu okanye izinto ezahlukeneyo ezinje ngobisi, amanzi okanye igumbi.
UkuFunda ngokuKhawulezayo nangokuchanekileyo: Fumana ukufundwa ngokuchanekileyo ngokukhawuleza ngaphakathi komzuzwana omnye kwaye umphumo wokulinganisa ubonakalisa ubushushu bomzimba womntu. Ngaphandle kwawo nawuphi na umsebenzi, iya kuvalwa ngokuzenzekelayo emva kwemizuzwana engama-20, edlala indima yokusebenzisa amandla asezantsi.
Uyilo olulula: Cacisa ukubonisa kunye nokusebenza kwamaqhosha okwenza ukuba ithemometha isebenziseke lula. Umboniso okhanyayo ulungele ukusetyenziswa ebusuku kunye nomlinganiso weqondo lobushushu. Ngesiphatho esitofotofo kwaye senziwe ngobukhulu obuncinci, ungasithatha kuyo yonke indawo.
Ithemometha ethembekileyo: Imibala emithathu yokubonisa ubushushu obomvu o-orenji oluhlaza, ukuba unefiva okanye iqondo lobushushu eliphezulu, kuyakubakho isikhuseli esikhawulezileyo se-infrared thermometer. Cinezela "Imowudi" ukutshintshela kumlinganiso webunzi lomntu ukuya kumlinganiso weNjongo.
Egqithileyo X6 ngwevu
Okulandelayo: Ubushushu kumpu umpu X5